1550nm 100mW DFB PM Fiber Butterfly လေဆာလေဆာ Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1550nm 100mW DFB PM Fiber Butterfly လေဆာရောင်ခြည်
1550nm 100mW DFB PM Fiber Butterfly လေဆာရောင်ခြည်
1550nm 100mW DFB PM fiber fiber Butterfly Laser Diode သည် multiquantum ကောင်းစွာ (MQW) ဖြန့်ဝေ - တုံ့ပြန်ချက် (DFB) နှင့်အလွန်စိတ်ချရသောခေါင်လှိုင်းပုံဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤကိရိယာသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ၁၄ pin pin butterfly အထုပ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး FC / APC-connectorized polarization-ထိန်းသိမ်းသည့်ဖိုင်ဘာ၏ 1m နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
၁.၅၅၀nm ၁၀၀ MW DFB PM fiber fiber Butterfly Laser Diode ၏အကျဉ်းချုပ်
1550nm 100mW DFB PM fiber fiber Butterfly Laser Diode ၏နိဒါန်း
၁၅၅၀nm ၁၀၀ MW DFB PM fiber fiber Butterfly Laser Diode ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
100mW မြင့်မားသော output ကိုပါဝါ;
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး multiquantum ကောင်းစွာ (MQW) ဖြန့်ဝေ - တုံ့ပြန်ချက် (DFB) လေဆာ။
4. 1550nm 100mW DFB PM ဖိုင်ဘာ Butterfly လေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
1550nm 100mW DFB PM fiber fiber Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode ၏ 5. Electro-Optical Charactericals (T = 25âƒ)
optical output ကိုပါဝါ PO TL = 15ï½ž35â "ƒ CW - 100 - mW
လက်ရှိ Threshold အိုင်တီ - - 25 40 mA
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု ƞ CW output ကို 50mW 0.10 0.2 0.4 mW / mA
operating လက်ရှိ ဟုတ်ပြီ PO = 100mW (CW) - 600 - mA
ရောင်စဉ်တန်းလိုင်းအကျယ် LW FWHM - - 1 MHz
လေဆာရှေ့သို့ဗို့အား VF CW output ကို 100mW - - 3.0 V
Side-mode ကိုဖိနှိပ်မှုအချိုး SMSR CW 30 45 - dB
optical အထီးကျန်မှုတွေ - -10 <+ 70â "" 30 35 - dB
polarization ကိုမျိုးသုဉ်းအချိုး Per - 20 - - dB
ဆွေမျိုး Intensity ဆူညံသံ Rin 20 - 1000 MHz - - 160 dB
TEC သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန် Ts - 20 - 35 ℃
input impedance ZIN - - 20 - Ω
TEC လက်ရှိ ITEC TL = 25â, TC = 70â '' - 0.6 1.3 A
TEC ဗို့အား VTEC TL = 25â, TC = 70â '' - 1.3 3.7 V
အမှုအပူချိန်နှင့်အတူလှိုင်းအလျားပျံ့ Î "Î» / Î" T က 0â "ƒ <65â" " - - 0.001 nm / â
လှိုင်းအလျားအပူချိန်ညှိနိုင်ခြင်း Î” Î» / Î” Î™ 20âƒ <35â "ƒ 0.07 - 0.12 nm / â
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1550nm 100mW DFB PM fiber fiber Butterfly Laser Diode
ပင်နံပါတ် ဖော်ပြချက် ပင်နံပါတ် ဖော်ပြချက်
1 အပူချိန် 14 NC
2 အပူချိန် 13 လေဆာ Anode (+), ဖြစ်ရပ်မှန် Ground
3 Laser dc ဘက်လိုက်မှု (Cathode) (â€) 12 လေဆာ RF ကက်တ်ဒီ (-)
4 PD Monitor Anode (-) 11 လေဆာ Anode (+), ဖြစ်ရပ်မှန် Ground
5 PD Monitor Cathode (+) 10 NC
6 TEC (+)9ဓာတ်ငွေ့မြေပြင်
7 TEC (â€) 8 ဓာတ်ငွေ့မြေပြင်
7. 1550nm 100mW DFB PM fiber fiber Butterfly Laser Diode ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
A: Box optronics သည် CWDM နှင့် DWDM လှိုင်းအလျားများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
hot Tags:: 1550nm 100mW DFB PM Fiber Butterfly လေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကား, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံလုပ်, စျေးပေါ၊